रुकुम-जाजरकोट:नवराज र सुस्माको कहाँनी सुन्दा समलिङ्गी जोडिको थामिएन आँ सु,केटाकेटा अन्तरजातीय बिहे गरेका जोडि भन्छन सुस्माले बोल्नुपर्यो न्याय पाउनुपर्यो (भिडियो सहित) – osnepal tv
प्रेमले न कहिले जात न धर्म न लिङ्ग न त केही हेरिन्छ यहाँ केटा केटा त्यो पनि अन्तरजातिय बिबाह गरेका रुपक अनि अनिभवको कहाँनी आफैमा नरमाइलो लाग्ने खालको छ । रुकुम-जाजरकोटमा एउटा प्रेम कहाँनी कलिलैमा चुडिएको छ त्यो पनि जातकै कारणले गर्दा । आज समलिङ्गी जोडी नवराज र सुस्माको कहाँनी सुन्दा सुन्दै भावुक बने ।
भनिन्छ प्रेम सन्सारकै सबैभन्दा राम्रो अनि प्यारो हुन्छ । प्रेमको आँखा हुदैन। घनी गरिब जात धर्म केही हेरिदैन साचो मायामा भन्ने भनाइ उखान मात्र जस्तो भएको छ । बिचरा नवराज बिक एक दलित परिवारमा जन्म लिएअ । यसमा न त उनको पाप थियो न त गल्ती नै,एक युवतिको प्रेममा चुर्लुम्मै डुबेका उनी भबिस्यका मिठा मिठा सपना देख्न थाल्दै गर्दा सन्सार नै छोडेर जानुपर्यो । आफुभन्दा माथिल्लो जातकी केटिसङ प्रेम गरेकै कारण उनले कलिलैमा आफ्नो ज्यान फाल्नु पर्यो । उनका धेरै सपनाहरु अनायसै टुटेर गए त्यो साथ सबै छुटेर गए ।
परिवारमा एक्ला छोरा उनी आज सबैलाई छाडेर भगवानका प्यारा भए । घरमा सबैको रुवाबासी चल्यो । सबै आतिदै डराउदै नवराजलाई खोज्दै छन । चेलीबेटीहरु रुदारुदै बाटैमा ढले । पूरा देश नै शोकमा डुब्यो । धेरैपछि केटाकेटा अन्तरजातिय बिहे गरेका अनुभव दर्जी र रुपक मिडियामा आएका छन । उनिहरुले नवराज बिकको कहाँनी सुन्दा सुन्दै आँ सु खसालेका छन । न्याय पाउनैपर्छ भन्दै यस्तोसम्म भनेका छन तलको भिडियोमा हेर्नुहोला
Previous article नवराजकी प्रेमिकाको पेटमा बच्चा छ भन्ने साचो कि झुटो ? कसरि बाहिरियो यस्तो कुरा ?(भिडियो हेर्नुहोस )
Next article कालापानी लिपुलेक हाम्रो हो भन्दै आमाले भारतलाई फर्काइन कसैले नसोचेको जवाफ(हेर्नुहोस भिडियो)